Madaxweyne hore oo loo maxkamadeynayo 430 milyan oo uu ka qatay Col. Qadaafi. - NorSom News
Madaxweyne hore oo loo maxkamadeynayo 430 milyan oo uu ka qatay Col. Qadaafi.
Madaxweynihii hore ee dalka Faransiiska, Nicolas Sarkozy ayaa loo maxkadeyn doonaa kiis la xiriira musuq-maasuq dhaqaale iyo inuu qaab sharci daro ah ku maalgaliyay ololihiisii madaxweyne ee sanadkii 2012.
Sarkozy ayaa ku eedeysan inuu sanadkii 2012 lacag dhan 430 milyan kr ka helay madaxweynihii dalka Libya, Col. Mucamar Qadaafi. Wuxuuna hada ku eedeysanyahay inuu madax dal ajnabi ah ka qaatay lacag uu ku maalgaliyo doorashadiisa, wuxuuna ku muteysan karaa sanado badan oo xabsi ah.
Sarkozy ayaa sanadkii 2012 looga adkaaday tartanka doorashashada madaxweyne ee dalka France, waxaana ka adkaaday François Hollande oo ilaa sanadkii 2017 ahaa madaxweynaha dalkaas.
Xigasho/kilde: Sarkozy for retten for ulovlig valgkampfinansiering
Previous articleArne Viste: Waxaa maxkamad loo saarayaa, inuu shaqo siiyay dad aan sharci Norway ku heysan.
Next articleSweden: Siyaasi asal ahaan ajnabi ah oo noqday wasiirka ceymiska.